राम्रोसँग फोरजी चलाउन के गर्ने ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस मोबाइल किन्दा « Postpati – News For All
राम्रोसँग फोरजी चलाउन के गर्ने ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस मोबाइल किन्दा
पुस १७, काठमाडौँ । मोबाइलमा फोरजी चलाउनको लागि ८०० तथा १८०० मेगाहर्ज प्रयोग गर्न सकिने मोबाइल सेट उपलब्ध भएमा राम्रो सँग चल्ने टेलिकमले जनाएको छ । हाल नेपाल टेलिकमले १८०० मेगाहर्ज (ब्यान्ड ३) र ८०० मेगाहर्ज (ब्यान्ड २०) ब्यान्डको रेडियो तरंगमार्फत फोरजी डाटा सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
गुणस्तरीय भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ८०० तथा १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दुवै प्रयोग हुन्छन । तर अधिकांश मोबाइल सेटहरु १८०० मेगाहर्जमा चलाउन सकिने र ८०० मेगाहर्ज प्रयोग गर्न सकिने मोबाइल से कम मात्रामा पाइने भएकाले फोजी राम्रो सँग नचल्न सक्छ ।
नेपालमा विकट, दुर्गम र अधिकांश ग्रामीण भेगमा ८०० मेगाहर्जमा फोरजी सेवा उपलब्ध भइरहेकाले फोरजी सेवा प्रयोगमा ल्याउन यही व्याण्ड चल्ने मोबाइल सेट प्रयोग गर्नुपर्दछ । उपयुक्त मोबाइल सेटको अभावमा फोरजी सेवाबाट अधिकतम फाइदा लिन नसकिने हुन्छ ।
टेलिकमले हाल देशका विभिन्न शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत फोरजी सेवा विस्तार गरिरहेको छ । त्यसैले फोरजी डाटा सेवामार्फत अधिकतम फाइदा लिनका लागि १८०० तथा ८०० मेगाहर्ज दुवै ब्यान्डमा चल्ने मोबाइल सेट प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।
मोबाइल चलाउँदा सेटको सेटिङमा नेटवर्कलाई जहिले पनि फोरजी नेटवर्क प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जसले गर्दा आवश्यकता अनुसार फोरजी वा अन्य प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै नयाँ मोबाइल सेट किन्दा यसको बक्समा उपलब्ध विस्तृत प्राविधिक विवरण हेरेर कुन मेगाहर्जमा चल्ने मोबाइल सेट हो भनी पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
टेलिकमले भविष्यमा २३०० मेगाहर्ज (ब्यान्ड ४०)मा समेत फोरजी सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । कम्पनीले मुलुकका ६४ जिल्लामा फोरजी सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक चतुर्थ श्रेणिको किताब बजारमा
नयाँ वर्ष २०२० का लागि भायानेटले ल्यायो नयाँ प्लान